Guddiyo si hor dhac ah uga wada hadlaya shirka uu ku baaqay Farmaajo - Awdinle Online
Guddiyo si hor dhac ah uga wada hadlaya shirka uu ku baaqay Farmaajo
Maanta oo Sabti ah ayaa waxaa lagu wadaa in Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay inay gaaraan Guddiyo farsamo oo loo xilsaaray diyaarinta iyo qabsoomida Shirka Garoowe ee uu ku baaqay Madaxweynaha mudada xilheyntiisa ay dhamaatay ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Guddiyadaan oo ka kooban 14 Xubnood ayaa waxaa ay ka kala socdaan dowladda Federaalka Soomaaliya, Shanta dowlad Goboleed & Gobolka Banaadir, waxaana la sameeyay kadib markii Xukuumadda Soomaaliya ay warqad u dirtay Maamul Goboleedyada & Gobolka Banaadir si guddiga loo sameeyo.
Xogaha aan helnay ayaa sheegaya in Guddiyadaan ay shir ku yeelanayaan Magaalada Baydhabo si ay uga arrinsadaan nooca ugu sahlan oo ay xal uga gaari karaan Hoggaamiyayaasha Soomaalida muranka doorashooyinka.
Sidoo kale wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in guddiyada ay ka Shaqeyn doonaan halka lagu qabanayo Shirka wadatashiga, in kastoo weli Madaxda dowladda ay ku adkeysanayaan in Shirka lagu qabanayo Magaalada Garoowe.
15-ka bishaan oo ku beegan Maalinta Isniinta ah ee soo socota ayaa waxaa Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmajo uu iclaamiyay in uu Shirka ka qabsoomo magaalada Garoowe, hayeeshee Puntland ay dalbatay in muqdisho lagu qabto, waxaana ku raacay Maamulka Jubbland, Guddoomiyaha Aqalka Sare & Midowga Musharixiinta.
Next articleUrurka Jaamacadda Carabta oo baaq kasoo saaray muranka doorashada Soomaaliya